मेरो घर मा काम गर्ने केटी लाई चिकेको कथा - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » मेरो घर मा काम गर्ने केटी लाई चिकेको कथा
मेरो घर मा काम गर्ने केटी लाई चिकेको कथा
म बिदेश बाट फर्केको पहिलो दिन म हाम्रो घर मा १ नयाँ केटी देखेर दङ्ग परे ।त्यो केटी लाई हाम्रो आमा बुवा ले काम सघाउन भनेर काठ्मान्डौ ल्याउनु भएको रहेछ, कुरा पछी थाहा भयो । उन्को नाम मिना रहेछ । बिहान कलेज मा पढ्दी रहिछ । केटी राम्री नै थिई । तर दुध भने बडो ठुला ठुला अनि गोलो आकार को टिसर्ट बाट नै देखिन्थ्यो । म २- ४ दिन मा मेरो अनि मिना को कुराकानी हुन थाल्यो, केटी बोल्न मा पनि अगाडी थिई । मैले त घर आउने बित्तिकै नै हो मिना सँग चिक्ने कल्पना गर्न थालेको । तर माहोल पनि त मिलाउनु पर्यो, आज्कल को जमाना मा जबरजस्ती पनि गर्नु भएन त्यो पनि सेक्स को मामला मा । केटी हरु लाई पनि त केटा लाई भन्दा धेरै सेक्स चाहाना हुन्छ नि , तर केटी हरु धेरै सम्हलिन सक्छन । मैले पनि उन्लाई पनि सहज बातबरण मा लेराउन कोसिस गर्दै थिए ।
हुन त केटी मान्छे ले हामी केटा हरुको आखा मा हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउछन कि हाम्रो मन मा के खेलेको छ भनेर । तर पनि उनिहरु थाहा नपए जस्तै गर्छन । हुन पनि मिना लाई देख्ने बित्तिकै मलाई समाएर चिकी हालु जस्तो हुन्थ्यो जुन कुरा मिना लाई थाहा थियो । हाम्रो कुरा आज्कल प्रेम सम्म पुगेको थियो भने म कुरा लाई सेक्स सम्म पुर्याएर उनिलाई राजी गराउन लागी परेको थिए । म उन्को रुपको बर्णन हमेसा गरी रहन्थे हुन पनि उ राम्री थिई । उन्को ओठ पनि निकै सेक्सी थियो । तिम्रो कती सेक्सी लिप्स रहेछ भन्दा उ लाज मानेर अरु सेक्सी देखिन्थी । मैले अब दुध को बारेमा पनि कमेन्ट गर्ने बिचार गरी रहेको थिए । जुन दुध हेर्ने मेरो दैनिक दिन चर्या नै भएको थियो ।एक दुई दिन गर्दै हामी धेरै नै परिचित अनि खुलेर कुरा गर्ने भएक थियौ भने मिना को पनि म प्रती थोरै बए पनि लगाब रहेको मैले महसुस गर्न थालेको थिए ।
एक्दिन कुरै करा मा मैले मिना को दुध अति नै राम्रो अनि आकर्सक भएको कुरा सुनाए । उ लाज ले पहिला त केहि बोलिन अनिकेहि रिसाए जस्तो गर्दै भन्न थाली ” मलाई थाहा थियो कि तपाई सधै मेरो छाती मा नै आखा लगाउँउ हुन्थ्यो भन्ने” । मैले कुरा सिधै स्विकारे र भने जुन कुरा साचै राम्रो छ त्यस्लाई हेर्ने धेरै हुन्छन । हुन पनि मिना को दुध अतिनै राम्रो थियो । कपडा बाहिर बाट त त्यती सुन्दर देखेको छ भने खोलेर हेर्न अनि छुन पाए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला । मैले केहि बाकी नरखी कुरा भनिदिए । मिना ले जे ठाने पनि मैले आफ्नो कुरा प्रस्ट नै भने । उस्ले केहि बोलिन । तर रिसए जस्तो गरी । मलाई थाहा छ उस्लाई के बितेको छ भनेर । दिन हरु बितिरहेको थिए एक दिन मिना को पहिलो बर्ष को रिजल्ट भयो । मिना पास भई मैले उस्लाई बधाई दिदै उस्लाई अङालो मा हग गरे त्यो म्जेरो पहिलो दिन थियो मिना को दुध को पहिलो स्पर्स मेरो छाती मा आहा कती न्यानो फिलिङ आको हो नो । मिना पनि मलाई आङालेर थ्यान्क्स दिई । मैले भने थ्यान्क्स ले मात्र चल्दैन है अरु पनि चाहिन्छ । उस्ले भनी हुन्छ ।
कुरा एक दिन को हो मैले दिउसो देखी बाट नै मिना लाई जिस्काई रहेको थिए । उ मलाई पनि रिसए जस्तै गर्दै गाली गर्दै थिए । त्यो दिन मैले मिना लाई भनेको थिए कि आज म तिम्रो कोठा मा आउछु ठोका को लक नलगाउ है । उ रिसाउदै भन्छे हिम्ममत छ भने आएर देखाउनु न त । मैले चयलेन्ज गर्दै भने हेर लक लगए पनि आउछु आउछु । उ रिसाउदै आमा बुवा लाई भनिदिने धम्की दिन्छे । मैले जे गरे पनि गर तर म आज आउछु भने । उ अलि डरए जस्ती देखिथी भने सम्हालिदै मजाक ग्नगर्न भन्थी । बेलुका भयो म मिना को रुम मा पुगे । म सरसर मिना को नजिक नै पुगे अनि बसे । मिना यो पटक भने साच्चै डराई अनि भन्न थाली आमा बाबा ले देक्नु भयो मेरो के हाल होला ? मैले सम्झाउदै भने नडराउ म कसै लाई पनि भन्दिन । अनि आमा बुवा पनि सुती सक्नु भएको छक भनेर भने । मिना मलाई सम्झाउदै पर हट्न लागेकी मात्र के थिई मैले मिना लाई चयाप्प समती हाले अनि उस्को नेक मा किस गर्न थाले भने दुबै हात ले एक एक वटा दुध माड्न थाले । पहिला त मिना ले धेरै प्र्तिबाद गर्न खोजी तर मैले मेरो दर्हो अङालो मा कसेर दुध माड्ने अनि पुतिको माथी हात माड्ने गरे पछी केहि सान्त भै म अब मेरो धेरै दिन को चाहाना अनुसार मिनाको दुध हेर्न चुस्न अनि दुध सँग खेल्न को लागी तयार भएको थिए । अब मैले बिसतारै कामुक तरिका ले मिनाका दुध मा छुन थाले । उनले ऊ… आ. .. अया…आया…ओ…ऑ…आई..ऊ…मम…उम्म…जस्ता आवाज निकाल्न थालिन्। अनि मेरो पालो मेरो दाहिने हात बिस्तारै उनको घोडामा राखें । देब्रे हातले एउटा दुध मोल्दै दाहिने हातले उनको साप्रा सुम्सुम्याउँदै उनको अनारी सम्म पुगें । उनि त झन् ठुलो स्वरमा ओओ…हूहो……ई…ऊ…ए…ओ…ऑ…जस्ता आवाज निकाल्न थालिन् ।
एउटा हातले दुध मोल्दै अर्को हातले पुति सुम्सुम्याउँदै बिस्तारै मैले उनको गतिमा किस गर्दै बिस्तारै कानमा अनि गालामा अनि फेरी बिस्तारै उनको मुखमा पुगें र मेरो मुखले उनको मुख टम्म थुनिदिएँ । त्यसपछि मैले मेरो दाहिने हात उनको पेन्टी भित्र छिराएँ । उनले धेरै पनि निकालिसकेकी रहेछिन्, जसलेगर्दा उनको पेन्टी पुरै भिजेको थियो । उनको त्यो भर्खर उम्रन खोजेका सेता खैरा रौँ, आहाहा…कति प्यारो र सुन्दर अनि मैले मेरो हात निकालेर पेन्टीबाहिर बाटनै सुम्सुम्याउन थालें । बिस्तारै फेरी भित्र छिराएँ र उनको पुतिमा औंलाले पुतिको ओरिपरी रगट्दै एउटा हातले दुध मोल्दै मुखमा किस गर्दै अर्को हातले उनको पुती चलाउन थालें । मैले अब दाहिने हातको औंला उनको पुती भित्र र बाहिर गर्न थालेको त उनि ऐया…उउउ… ओं…य…स्स्स्स्स्स्स्स्स्स…उम्म्म्म्म्म्म्म … भन्दै कराउँदै चित्कार अफ्नो मुखबाट निकाल्दै थिन् । उनलाई सायद धेरै मजा आइरहेको थियो र उनि अफ्नो त्यो कसिलो पुक्क परेको पुतिमा छिटो लाडो घुसारेस् भन्ने चाहन्थिन् होला । त्यसैले मैले पनि ढिला नगरी बिस्तारै दाहिने हात उनको पुतिबाट झिकेर उनको स्कर्ट र टिसर्ट खोलिदिएँ अनि उनलाई किस गर्दै छिटोछिटो आफ्ना सबै कपडा खोलि नांगै भएँ र उनको पेन्टी पनि खोलिदिएँ ।
अब हामी दुवै जना जन्मजात नग्न भएका थियौं । दुवै हातले उनको दुध मोल्दै बिस्तारै मुखबाट किस गर्दै उनको त्यो कुवा सम्म पुगें र मजाले उनको त्यो कुवाको नुनिलो पनि खाना थालें ।उनि ओओ…हूहो… ई…ऊ…ए…ओ…ऑ…जस्ता आवाज निकाल्दै थिन् मैले पनि मेरो लडो उनको पुतिको किनारमा दलें र बिस्तारै उनको पुतिको प्वालमा हालें तर तेत्रो पनि फ्याक्दा पनि मेरो लडो उनको त्यो कसिलो पुतिमा छिरें । त्यसैले मैले मज्जाले बल गरेर धक्क दिएको त स्वात्तै छिर्यो ।
मैले मेरो लडो एकछिन नाचलाईकन उनको पुती भित्रै पछि बिस्तारै पुतिभित्र लडो चलाउन थालें । अनि बिस्तारै लादोलाई भित्र बाहिर गरौँ थालें । अब त उ पनि तलबाट बल लगाएर मलाई साथ दिन थालिन् । त्यसपछि मैले पनि फटाफट् लडो भित्र बाहिर गर्न थालें । उनि आहा…ओहो…हेहे…उहु.. म्म्म्म…ऊऊऊऊम्म्म्म…भन्दै थिन् । यसरी करिब ३० मिनेट जति मच्चियपछि म सिथिल भएँ अनि उनि पनि । मैले मेरो लडो निकालेर उनको मुख भरि झरिदिएँ र मेरो लडो उनको मुखमा कोचिदिएँ । उनले मेरो लडोलाई लालीपप जसरि चुस्न थालिन् । अनि मैले मेरो लडोलाई उनकै मुखमा नै भित्र र बाहिर गरौँ थालें । फेरी मैले मेरो लडोलाई उनको पुतिभित्र घुसारेर दनादन दिन थालें । करिब ४५ मिनेट जति चिकेपाची म पुरै सिथिल भएँर उनीमाथि सुतें र उनि पनि सिथिल भएकी थिन् । यत्तिकैमा हामी दुवै जना निदायछौँ ।
उनको प्यास बुझायो, चिकेको कथा, भाउजुको यौन प्यास, भाउजुले मलाई अँगालेर किस खानु भो, मात्र सेक्स, मेरो घर मा काम गर्ने केटी लाई चिकेको कथा, मोटो लाडो मेरो सानो पुती मा, यौन प्यास, सेक्स नगरेकोले', सेक्स भन्ने चीज
chwaak keti pani chikiyo
priyanka didi lai pani chikiyo